Gov. Kristi Noem hirmaatota South Dakota Athletic Commission hundaa akka waraqaa raga talaali Covid-19 kan fudhatan akka mullisan gaafate.
Noem akka jetteti talaali mootumman dhaabame passport talaali kaluu kanatti ka dhoogamu seera gaafatamu jala akka jiru himan.
Seera baasadhan, Police, sheriff, fi patrol state Nebraska kessati yaada qarqaarsa mootumman godhamen itti gaaftamummaa guddaan kan isaan muudatu ta’a waan walitti bu’iinsa uumu irrati leenji haarawa dabalata kan fudhatan ta’a.
Seera eeysistoota agencies tokko tokko keessati seerri garii ulfaata tauu nimala jechuudhan sodaan jiraatus senator seerra jalqabaa murteesani jiran.
Filannoon kun kan dhagahames police officer Minneopolis Derek Chauvin kan Goerge Floyd ajjeese murtin erga itti murtaahe guyyaa borumtaa kan dhufeedha, kunis hiriira nagahaa biyyaa mara irrati kan godhamaa tureedha Nebraska dabalatee.
Marijuana seera irrati hundaahe paarti polotika ammaa qophaahu nidanda’a fi beekamti mootuma erga argatee booda filattooni Nebraska galmaahan gaafachu nidandau. Marijuana seera amma paarti dhuunfa isaa tauudhaf seera hundaa guute jira. Moggaafamni isaa filattooni partii irrati akka galmaahani kan danda’an yoo tau itti gaaftamtooni partiidhani ammo birro partiidhanitti kennuu ni dandau.
Oromo News 04.22.21
By Fatiya Adam • Apr 22, 2021
Governor South Dakota Kristi Noem magaala keessati passport Covid-19 akka dhoogame himtee.
Noem akka jettetti akka dhukubni kun jalqabe irraa South Dakota amante turtee akka filannoon isaani ufii fi nama jaalatanifis gaari tau.
Akka waalgetti guyyaa har’aati, Iowa Governor Kim Reynolds akka ummani talaali corona virus fudhatan dirqamsiiste.